एकता बढाउँदै राप्रपा नेपाल र राप्रपा जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
एकता बढाउँदै राप्रपा नेपाल र राप्रपा
जनबोली १० चैत, काठमाडौं । राप्रपा नेपाल र राप्रपाबीचको एकता प्रक्रिया अघि बढाउन दुई छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरिएको छ । मंगलबार राप्रपाको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको दुई पार्टीको वार्ता समितिको बैठकले सैद्धान्तिक र प्राविधिक विषय मिलाउन छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेको हो ।
बैठकले पार्टी एकताको वैचारिक आधारबारे टुंगो लगाउन राप्रपा नेपालबाट केशरबहादुर विष्ट, निरञ्जन थापा, राजाराम श्रेष्ठ र राप्रपाबाट दीपक बोहरा, ठाकुर शर्मा र रामकृष्ण भट्टराई रहेको सैद्धान्तिक समिति गठन गरेको छ ।
त्यस्तै केन्द्रदेखि जिल्लातहसम्मको नेतृत्व समायोजनको विषय टुंगो लगायन राप्रपा नेपालबाट डा. धवलशम्शेर राणा, चन्द्रबहादुर गुरुङ, दीलनाथ गिरी, मोहन श्रेष्ठ र राप्रपाबाट वुद्धिमान तामाङ, भुवन पाठक, किरण गिरी र हेमजंग गुरुङ रहेको प्राविधिक समिति बनाएको हो ।
मंगलबार भएको दोश्रो चरणको वार्तापछि पार्टी एकताको प्रक्रिया धेरै अघि बढेको राप्रपा नेपालका सहप्रवक्ता तथा वार्ता टोली सदस्य मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले दुई पार्टीबीच एकता गरी नयाँ वर्षमा नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण हुने पनि बताए ।
२०६२ सालसम्म एउटै पार्टीमा रहेको राप्रपा नेपाल र राप्रपाबीच एक महिनायता एकता प्रक्रिया अघि बढेको छ । दुबै पार्टीले वाग्लुङ क्षेत्र नम्बर १ मा चैत २८ गते हुने उपनिर्वाचनमा संयुक्त उम्मेदवारी दिएका छन् ।